एउटै हात्तीको १ करोड रुपैयाँ, आस्था र ऐन विपरित किनबेच | Citizen Post News
सौराह । पर्यटीय नगरी चितवनका सौराह नपुगेको को नहोला ? त्यसमा पनि सौराह पुगेपछि हात्तीमा चढेर जंगलको सफारी नगरी घर फर्कने कमै होलान् । चितवनको पर्यटन ब्यवसायलाई मौलाउन बल हात्तीले ठूलो सहयोग पुर्याइरहेको छ । तर हात्तीमा जंगल सफारी गर्नेलाई के थाहा छ एउटा हात्तीको कति पर्छ ? ल अनुमान गरौं त । दुई लाख, ५ लाख, १० लाख वा २० लाख रुपैयाँ ? अहँ ! कुनै पनि होइन ।
चितवनको सौराहास्थित होटल रोयल सफारीका सञ्चाक तथा पर्यटन ब्यवसायी शम्भु मालीका अनुसार हात्तीलाई भारतबाट किनेर ल्याइन्छ । एउटा तालिम प्राप्त हात्तीको मुल्य ८० लाखदेखि १ करोड २० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ ।
कति कमाउँछ एउटा हात्तीले ?
करिब १ करोड भन्दा बढी मुल्य पर्ने हात्तीले कति कमाउँछ होला ? यो पनि खुल्दुलीको विषय हो । प्रायजसो सौराहमा रहेका राम्रा होटलहरुको आफ्नै हात्ती किनेर राख्ने गरेका छन् । हात्ती सफारीका लागि एक जना विदेशीले २ हजार ५०० र अतिरिक्त दुई हजार गरी ४,५०० रुपैयाँ तिनुपर्छ ।
एउटा नेपालीका लागि १ हजार २५० र अतिरिक्त १५० गरी १ हजार ४०० सय रुपैयाँ लाग्छ भने एक भारतीय नागरिकका लागि १ हजार ८५० र अतिरिक्त १००० गरी दुई हजार ८५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एउटा हात्तीले दैनिक ५ देखि ८ वटा समूहलाई जंगलमा सफारी गराउनुपर्छ । एउटा हात्तीमा न्यूनतम ३ देखि ५ जनासम्म चढ्ने गरेको पाइन्छ । अब दैनिक ५ वटा समूहलाई एउटा हात्तीले सरदर ४ जनाको दरले एक पटकमा बोक्यो भने उसले कति कमाउँछ त ? फेरि हिसाब गरौं ।
नेपाली र भारतीय बाहेक विदेशी मात्र बोकेको खण्डमा एउटा हात्तीले प्रत्येक दिन ९० हजार रुपैयाँ कमाउँछ । (४५००*४*५)=९०,०००। त्यस्तै भारतीय मात्र बोकेको खण्डमा (२८५०*४*५) गर्दा दैनिक ५७,००० हजार रुपैयाँ कमाउँछ । अब नेपाली मात्र चढेको खण्डमा (१४००*४*५) २८,००० हजार रुपैयाँ कमाउँछ । यही हिसाबले मासिक र बार्षिक एउटा हात्तीले कति कमाउँछ ? त्यो तपाईले पनि अब सजिलै हिसाब निकाल्न सक्नुहुन्छ । अहिले चितवनको सौराहामा करिब ७० वटा हात्तीहरु जंगल सफारीका लागि प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
लोपउन्मुख हात्तीको किनबेचः
लोपउन्मुख वन्यजन्तुको अनुसूचि ‘ए’ अन्तर्गत पर्ने हात्तीको खुलमखुला खरिद विक्री हुने गरेको छ । संकटान्मुख ऐनले हात्तीको खरिद विक्रीलाई बन्देज गरेको छ । तर संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३ मा नियामक निकायको स्वीकृतपछि भने हात्तीको किनबेच गर्न सकिने प्रावधान छ ।
ऐन नियमलाई धोती लगाएर सिमापारी बजारमा हात्तीको खुलेआम किनबेच हुने गरेको छ । आजभोली पशु अधिकारलाई लिएर हात्तीलाई जंगज सफारीका लागि प्रयोग गर्न नहुने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । स्वतन्त्र जंगलमा घुम्ने जनावरलाई यातना दिएर मान्छेले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न नहुने पशुअधिकारकर्मीले बताउन थालेका छन् । धार्मिक विश्वासका आधारमा पनि हात्तीलाई त्यसरी यातना दिन नहुने बताइन्छ । हिन्दुधर्म अनुसार हात्तीलाई गणेशको अवतारका रुपमा पुजा गरिन्छ ।